CBD Oil: eziokwu, ize ndụ na uzo ozo – Man Health UK
Cannabidiol (mma mara dị ka CBD) amụbawo okpukpu abụọ n'ime afo gara-aga. Ọ na-azọrọ na-enwe ike na enyemaka ka enye ihe niile, si mgbu ka ịda mbà n'obi na nchegbu , ma ndị bụ ndị a na-ekwu ezi? MH anya nso.
Gịnị bụ CBD mmanụ?
Ọ bụ ahịhịa, ma ọ bụghị dị ka ị maara na ọ. Cannabidiol, nke CBD, bụ a botanical wepụ nke hemp osisi. O nwere naanị Chọpụta ichekwa THC (na-emetụta uche umi na ahihia bụ iwu na-akwadoghị). Nke a pụtara na ị ga-esi elu, nakwa na ị gaghị dodgy bloke zukoro na Opel Vauxhall Corsa na ọchịchịrị windo zụrụ ya.
Gịnị na-ekwe nkwa CBD?
Preliminary ọmụmụ-atụ aro na CBD bara uru (miri emi ume) ehighị ụra nke ọma , imeju, agbakasị bowel syndrome , Àgwà Chaa Ọrịa, osteoporosis, PTSS, ọrịa strok, ọrịa obi na ọrịa, ịda mbà n'obi , -arịa ọrịa shuga na ogbu na nkwonkwo. The kasị ekwe uru na-edina na ọchịchị nchegbu ; adọ, nyere kwajuru ala nke oge a echiche ike.
Gịnị ka ọ na-?
Otu nnyocha kọrọ fọrọ nke nta otu na iri ọrụ na ha adịghị ala ala mgbu, mbufụt na angst ndị kpamkpam gwọrọ CBD, kwuru Jon Liebling nke United Ọrịa Alliance. Na ọ bụ ezie na a na-ekwu na ọ pụrụ ịgwọ ọrịa, ihe àmà na-egosi na-achọ, E nweghị ike na ihe mere ka ọ ghara frolic mgbe research abịakwasị elu.
Jacob Hooy CBD mmanụ 5% 10ml
Olee ebe m pụrụ enweta ya site na?
Ọ bụrụ na ị na-echeta na ya, ọ bụ oge dị mma ugbu a. Nnukwu ụdị dị ka Holland & Barrett na Health na-adịru na-azọpụta ya, of bieden hun eigen assortiment aan – wat geruststellend is, n'ihi na i nwere ike obi ike na ha kwekọrọ na echesinụ EU ụkpụrụ nduzi banyere ịdị ọcha, onunu ogwu na contaminants. The otu nwere ike ghara kwuru nke onwe ha online Jeriko, Ya mere, nọrọnụ n'ebe ha agwọ mmanụ.
Gịnị ga m na-ezere?
abụghị kwa obi ụtọ Touch. The mmeghachi omume nke ahụ na CBD-dose bụ * Tụkwasị. Were kwa nta na ị ga na-eche ihe ọ bụla; ukwuu na ị n'ihe ize ndụ mmetụta dị otú ahụ afọ ọsịsa , bụghị kpebisiri oyi bụ, nwoke. Research n'ime dose bụ ka inyoghi, dus bouw langzaam op om uw eigen “Goudlokje-zone” te vinden.
Alternatives na CBD Oil
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nwalee a dose of ihe ibu, agbalị mkpụrụ ọgwụ ndị a.
na-ata ahụhụ ndị mgbapụta mgbe Vitamin A, ihe antioxidant na e gosiri aka ịchịkwa ihe mgbaàmà nke nchekasị.
1.000 mg kwa ụbọchị (karịa n'ihe ọ bụla bụla latté), ma curcumin ọ na e dere a dị ike mgbochi mkpali.
Holland & Barrett organic turmeric elu ike na nwa ose 90 capsules 600 mg
Dị ka otu onye nke ụlọ nkanka nke cartilage, akwara na akwara, fixes na creaking nkwonkwo.
Holland & Barrett Extra Kracht Glucosamine Chondroitin Mgbagwoju 120 Caplets
Holland & Barrett Magnesium zutere Zinc 100 mbadamba